Manana fiainana mandrakizay - Fiangonan'Andriamanitra manerana izao tontolo izao Soisa
haino aman-jery > Mifantoha amin'i Jesosy > Mifantoha amin'i Jesosy 2020-03 > Nahazo fiainana mandrakizay
Tamin'ny andro lohataona mahafinaritra, dia niresaka tamin'ny olona nanodidina ny Ranomasin'i Galilia i Jesosy ary nanasitrana marary maro. Rehefa alina, dia hoy i Jesosy tamin'i Filipo, iray tamin'ny mpianany: "Aiza no hividianantsika mofo hohanina?" (Jaona 6,5). Tsy manam-bola firy izy ireo hanome mofo kely ny tsirairay. Nisy zaza iray nanana mofo orza dimy sy trondro roa, fa aiza ho aiza na aiza ny lehilahy tokony ho 5000 eo ho eo sy ny vady aman-janany.
Nasain'i Jesosy nitoby teo amin'ny bozaka isan-karazany ny olona. Nandray ny mofo izy, nijery ny lanitra, nisaotra azy, ary nomeny ny mpianatra. Ireo no mofo sy trondro nampitaina tamin'ny olona. Ny fiakarana mahafinaritra dia niseho tamin'ny fizarana ny sakafo. Rehefa feno, dia nanangona mofo bebe kokoa noho ny tamin'ny voalohany ny mpianatra.
Gaga ny olona raha nahita izany famantarana izany ka nanao hoe: "Ity tokoa ilay mpaminany izay ho tonga eto amin'izao tontolo izao" (Jaona 6,14). Hitan'i Jesosy fa te hanao azy ho mpanjaka izy ireo. Ny ampitso maraina dia nitady an'i Jesosy ny olona ary nahita azy teo amoron'ny farihy tao Kapernaomy. Nilaza i Jesosy fa tsy nitady azy noho ny fahagagana izy ireo, fa satria nihinana mofo sy trondro ampy dia ampy. Tsy ny hanome sakafo ho an'ny olona fotsiny anefa no nataon'i Jesosy. Hoy izy taminy: «Aza manahy ny momba ny sakafo fitaterana fotsiny, fa miezaha hahazo ny sakafo maharitra ary mitondra fiainana mandrakizay. Ny Zanak'olona hanome anao ity sakafo ity satria Andriamanitra Ray no nanamafy azy ho solontenany nahazo lalana » (Jaona 6,27 fandikana vaovao nataon'i Geneva).
Nanontany azy ny olona hoe inona no tokony hataon'izy ireo mba hampifaliana an'Andriamanitra? Dia novaliany hoe: "asan'Andriamanitra ny hinoanareo izay nirahiny" (Jaona 6,29).
Inona no tian'Andriamanitra ambara aminao amin'ity tantara ity? Faly izy fa manome anao finoana matanjaka ao amin'i Jesosy, ilay mesin'Andriamanitra. Midika izany fa manaiky an'i Jesosy ianao fa te hanome anao fiainana mandrakizay. Raha mandany an'i Jesosy ho tena sakafo sy ny rany ho fisotro tena izy, ho fampahatsiahivana ny famelana ny helokanao, dia hahazo fiainana mandrakizay ianao. I Jesosy manokana dia milaza aminao fa izy no mofon'ny fiainana ary tsy ho noana intsony ianao ary tsy hangetaheta intsony. «Na zovy na zovy no mino fa manana fiainana mandrakizay» (Jaona 6,47).
Izany no antony mahafaly ahy manome anao ny mofon'ny fiainana miaraka amin'ireto fisainana anio ireto. Ao amin'ny fitiavan'i Jesosy